Owuwu ihe owuwu, ihe obibi, usoro ahụike na nke oma | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Bio-ewu, a obibi, ike na oru oma ewu
Daniel Palomino | | General, Homelọ Green
N'oge a, ọtụtụ mmadụ na-amalite iri ngwaahịa ngwaahịa iji bịaruo ndụ ahụike karịa ebe ha maara nnukwu ngwaahịa kemịkal, nke ọtụtụ n'ime ha na-egbu egbu, nwere nri ọ bụla anyị nwere ike ịzụta na nnukwu ụlọ ahịa.
Ọ bụkwa na anyị jupụtara na ndị na-egbu egbu na ụbọchị anyị taa, ma ọ bụ n'ihi nri, mmetọ ikuku ma ọ bụ ụlọ nke aka anyị. Ee, ụlọ anyị nwekwara ike bụrụ ihe na-emerụ ahụ n'ihi ịdị adị nke kemịkalụ eji arụ ya.
Enwere ọtụtụ nke na ọbụna Greenpeace nwere mgbasa ya na-egbu egbu n'ụlọ.
Enwere ike ịchọta ihe ndị a na-emetọ ha ihe eji eme ulo dị ka simenti (a na-eji ya arụ ọtụtụ ụlọ), ha na-enwekarị ọla ndị dị arọ dị ka chrome, zinc, na ndị ọzọ.
Mmanụ na-esi na mmanụ na mmanụ na-ewepụta ihe na-egbu egbu ma na-egbu egbu dị ka toluene, xylene, ketones, wdg.
A naghị echekwa ihe ndị dị na PVC ebe ọ bụ na ha na-egbu egbu nke ukwuu mgbe arụpụtara ha na mgbe ha gbara ọkụ.
Ọ bụ n'ihi nke a A na-amụ bioconstruction, nke na-ezube imepụta ụlọ ndị dị mma ma dị mma nke ga-eme ka anyị na ha jikọọ aka.
Nkuzi ihe dika ihe abughi ihe ohuru, maka ndi nne na nna anyi azu azu ha biri na ulo obibi, obu ezie na otutu oge, oganihu na nkasi obi anyi nwere ike ju ugbua enyeghi.
Site na mgbe ahụ, A rụrụ ụlọ ndị ahụ n'ụzọ ọrụ aka site na iji ihe ndị sitere n'okike n'onwe ha dịka osisi ma ọ bụ okwute ma ha jisiri ike nye ndị bi ha ebe obibi zuru oke na agbanyeghị na ejiri ihe ndị a wuo ha, ọtụtụ n'ime ha erutela anyị n'ọnọdụ dị mma.
Ọ bụ ruo mgbe mgbanwe ụlọ ọrụ gini dugara anyi na owuwu nke taa, igwe ahu na simenti.
1 Green ụlọ
2 Kedu ihe anyị kwesịrị ilebara anya na ụlọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ?
4 Mmetụta nke ihe eji rụọ ụlọ
5 Uru ndị enwetara site na iwu ụlọ (maka ndị na-ewu ụlọ)
6 Bala-igbe oru ngo
Ngwongwo eji n'otu ulo ndia emeela ka o nwekwuo nma.
Ejirila ọtụtụ ngwaahịa ndị enwere ike itinye n'ọrụ na ụlọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma na-aga n'ihu na-arụ ọrụ dị elu dị ka mweghachi nke obí eze na ụlọ ndị okomoko.
Nke a n'ezie bu ya mere n'ihi ya ogo nma, ha anaghị adị oke ọnụ ma ha na-adịte aka karịa ka anyị wee chebe ego n'ikpeazụ.
Anyị kwesịrị ịhapụ ezigbo ebe obibi dị mma maka ụlọ nke oge a nke kwekọrọ na mkpa taa?
Ọ bụghị n'ezie. Elọ obibi nke obibi nwere ike inwe otu ọganihu dị ka nke a na-emebu yana nwee ụfọdụ uru, na mgbakwunye na ihe ahụike.
Uru dị iche iche na-elekwasị anya na a ụba nchekwa ume (maka nke a anyị na-etinye bioclimatic), nke na-eduga na a obere mmetụta gburugburu ebe obibi nke ulo anyi na a Mbelata oge mmezi nke ụlọ na, dị ka anyị kwuru na mbụ na ike ịzọpụta ike, a na-achọpụta n'akpa anyị.
Kedu ihe anyị kwesịrị ilebara anya na ụlọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ?
Iji malite ọrụ bioconstruction, a ghaghị iburu ọtụtụ ihe n'uche, nke mbụ bụ nkwanye iku onye ọrụ n'ọhịa a ebe ọ ga-azọpụta anyị ọtụtụ isi ọwụwa.
O bu ihe nwute, ndi na-ese ụkpụrụ ulo banyere nke a amachaghị banyere ihe owuwu eco, yabụ na anyị kwesiri ịchọ ọkachamara, ndị a pere mpe, mana ha dị na mpaghara mba niile ma anyị nwere ike ịchọta otu.
Ihe nke abuo bu geobiological ọmụmụ nke ala ebe a ga-ewu ụlọ.
N'ime ọmụmụ ihe a, mgbanwe ndị a ga-enwe na mbara ala ga-abụrịrị nkọwa zuru oke, n'ụzọ dị otu a anyị ga-enwe ike izere ma ọ bụ mebie mmeghari ọdịdị mpaghara nke nwere ike igbochi n'ọdịnihu, dịka ihe omumu banyere ala, radon gas emanations, ugwo ekwentị mkpanaaka, tebụl mmiri ebe mmiri na-asọ, oghere electromagnetic kpatara na akara ike na ogologo wdg.
Ozugbo enyochachara mbara ala ahụ ma mechaa ihe ọmụmụ banyere ọdịdị ala, ọdịbendị, na ọdịdị ihu igwe nke mpaghara ahụ, a na-arụ ọrụ ahụ na-eme ka ọ kwekọọ na necesidades na-azụ na ndị ga-eme n'ọdịnihu nwere.
Iji malite owuwu ụlọ Anyị nwere ike ịhọrọ site n'ọtụtụ ihe dịka seramiiki brik na brik, okwute, ụwa (kwadobere ụwa, adobe, mud) na osisi, nke a nwere ike ịbụ ihe siri ike ma ọ bụ na ogwe.
Nhọrọ nke osisi ga-adabere na nhazi nke emere site na ihe ndị nwere ike ịchọta na mpaghara ahụ.
N'ihe banyere ndị iche, dị ezigbo mkpa na bio-owuwu, a na-eji ihe okike eme ihe n'ọtụtụ imepụta dị ka eriri akwukwo nri (hemp, osisi, linen, eriri oyibo, owu na ahịhịa), cellulose na cork.
A na-eji Cork eme ihe na mpaghara a, ọ bụ ezie na cellulose na eriri osisi na-eme ụzọ ha, nke yiri ka ọ kwụsiri ike.
Mgbidi, ma ọ bụ n'ime ma ọ bụ n'èzí, enwere ike ịme ha dị ka akwa nzu, plasta eke ma ọ bụ ụrọ. Ma plasta na ngwa agha dị mfe ịchọta ma tinye.
N'okwu nke ogidi, ibo ụzọ na windo A ghaghi iji osisi mee ihe ndi sitere na ihe ndi ozo ma obu ndi ozo site na osisi osisi. Maka nke a, ihe kachasị mma bụ na ha sitere na asambodo ọhịa dịka FSC.
Ihe ndi ozo ndi ozo na-aru maka ulo ahihia bu ihe ndi ozo na varnish. Na mgbakwunye, ha ga-ekuru ume nakwa na ha anaghị ewepụta gas na-egbu egbu, ebe ọ bụ na agba agba sịntetik na-egbochi ọsụsọ.
Ọfụfụ na ụlọ dị ezigbo mkpa ebe ọ bụ na ọ bụrụ na ha enweghị ọsụsọ zuru oke, nsogbu odide na iru mmiri na-amalite, na-akpata nsogbu niile dị n'akụkụ.
N'aka nke ọzọ, n'oge nke nwụnye eletriki Anyị ga-eburu n'uche mkpa ọ dị inwe ezigbo njikọ ụwa, ntinye yiri nke spike ma ghara itinye eriri eletriki n'isi nke akwa ahụ iji zere mpaghara eletrik.
Mmetụta nke ihe eji rụọ ụlọ
N'ime ihe owuwu ihe okike, ihe okike na-emetụta ma ya mere mmetụta gburugburu ebe obibi dị ala, mmetụta gburugburu ebe obibi a anaghị amalite mgbe e wuru ụlọ ahụ ma ọ bụ mgbe a na-arụ ọrụ ahụ, mana mmetụta a dị n'akụkụ ya niile: mmịpụta, njem, njikwa, inye ọrụ, ọrụ, na njedebe nke ndụ na mkpofu.
Naanị m na-ekwupụta mmetụta nke ihe ndị ahụ mepụtara ma na gburugburu ebe obibi na ahụike ndị mmadụ (ọrịa na ọrịa ọrụ).
Ọganihu nke teknụzụ ahụ e kwuru n'elu mere ka o kwe omume ịkwalite njirimara teknụzụ nke ihe ndị ahụ, agbanyeghị, "akwụ ụgwọ" ya na njirimara ndu na nchekwa gburugburu ebe obibi.
Nke ahụ bụ, na ọdịdị nke ihe ọhụrụ maka iwu, nsogbu ọhụrụ apụtawo na ha, dịka: ụgwọ ọrụ gburugburu ebe obibi dị elu, nnukwu redioactivity, nsị, enweghị ọsụsọ, nnyonye anya site na ọkụ eletrik na magnetik, wdg. Ihe a niile na - ebute ụdị ụlọ obibi, ọ bụghị nke ọma na ahụike.
Ọ bụ n'ihi nke a ka bioconstruction ga-eto ma mee nke a n'ike n'ike, na-eji ihe ndị sitere n'okike dị ka ekwuolarị n'elu ma jiri ụfọdụ usoro kachasị mma maka owuwu ụlọ na-atụle:
Mmetụta dị na gburugburu ebe obibi n'oge usoro ndụ.
Mmetụta dị na ahụ ike ndị mmadụ.
Ngụkọta ume n'oge ndụ ya.
Uru ndị enwetara site na iwu ụlọ (maka ndị na-ewu ụlọ)
Na Spain maka iwu ụlọ (n'agbanyeghị etu ha hà) oru ngo di nkpa nke onye na-ese ụkpụrụ ụlọ ma ọ bụ ndị ọkachamara ndị ọzọ nwere nkà ndị a, dịka: ndị injinia ụlọ ọrụ, ọrụ ọhaneze, wdg, dabere na njirimara na ogo ọrụ ahụ.
Yabụ, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịbụ onye na-ewu ụlọ nke aka gị na mba a, ị gaghị eleghara nkọwa a dị mkpa anya.
N'otu aka ahụ, ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ị nwee onye ọrụ aka ị nwere ike ịgakwuru ma ọ bụrụ na enwere obi abụọ ọ bụla na nyocha ọzọ ị nwere ike ịhapụ n'ihi na ịnweghị ahụmịhe zuru oke.
Na obodo niile ọ dị mkpa ịrịọ tupu ikike maka ụdị ụlọ ọ bụla na iburu n'uche na dabere na obodo ọ bụla ụdị ikike nwere ike ịdị iche, onye ga-enye gị ikike a, onye nwere ikike iwepụta ọrụ a ...
Agbanyeghị na ọ nwere ike ịdị mgbagwoju anya, ọ bụrụ na ịmee iwu ihe owuwu nke onwe gị, ịnwere ike ịnweta usoro ndị a:
Mkpochapu ihe ize ndụ nke iwu mkpofu n'ihi enweghị nkwenye na iwu.
Mkpochapụ ihe isi ike na ọrụ nkwekọrịta maka inye mmiri, ọkụ eletrik na mmiri mkpofu.
Mkpochapụ ihe isi ike na nkwekọrịta nkwekọrịta mgbazinye ego metụtara ihe owuwu ma ọ bụ ohere ịnweta enyemaka na nnabata na netwọọdụ nnabata ime obodo na / ma ọ bụ enyemaka maka ọrụ ugbo na / ma ọ bụ enyemaka maka ịchekwa ike na ntinye nke ume emere.
Ọnọdụ ka mma maka ire ụlọ ma ọ bụ ihe owuwu.
Bala-igbe oru ngo
Dị ka ozi ndị ọzọ, m ga-ekwurịrị Project Bala-box Project, nke mejuputara iwu nke prototype nke obere ụlọ site na iji mgbochi osisi na ahịhịa emere.
Site na oru a, Ezubere ya iji kesaa uru nke obibi, ahụike na ịrụ ọrụ nke ọma.
Ndị na-akwado ọrụ a bụ Alfonso Zavala, onye na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ, na Luis Velasco, onye ọkwá nkà na onye na-ewu ụlọ, nwere mmasị na usoro Bioconstruction. Paloma Folache, onye weghachiri na teknụzụ na ngwa mgbidi, ọkacha mara na-arụchasị ihe okike, yana Pablo Bernaola, onye na-emepụta ihe gbasara ụlọ na-arụ ọrụ na ọkụ ọkụ, mezue otu ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Nchekwa ike » Homelọ Green » Bio-ewu, a obibi, ike na oru oma ewu
Kedu ihe na etu esi arụ ọrụ ike anyanwụ
Kedu ihe ọ bụ, olee otú e si mepụta ya na ihe ndị ojiji nke ike anyanwụ nke fotovoltaic